Ebe nchekwa ego - IntoKildare
Ebe obibi na Kildare dị maka akpa ọ bụla. Site na maa mma bed na nri ụtụtụ, Guesthouses na ghara ichefu oké seasonal enye maka mmalite ntinye akwụkwọ na ụfọdụ nke anyị magburu onwe ya hotels.
16 nsonaazụ (s)
Naanị otu awa site na Dublin, Castleview Farm B&B bụ ezigbo ụtọ ndụ na ugbo mmiri ara ehi Irish dị na County Kildare.
Nnukwu akwa na nri ụtụtụ na ugbo na-arụ ọrụ acre 180 nke nwere ọmarịcha echiche nke ime obodo.
Ugbo ala nke Kilkea
Ụlọ si n'ụlọ, Kilkea Lodge Farm bụ nnukwu B&B maka ezumike ezumike n'ime ime obodo.
Ezinaụlọ na-agba ọsọ ndina na nri ụtụtụ n'etiti Naas, na-enye ohere nke ịnweta ihe niile dị na mpaghara ahụ.